Hazo madinika | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Hazo madinika
Aretina sy fahasimbana amin'ny loholona ho an'ilay olona
Elderberry dia kolotsaina malaza eo amin'ny latabay. Efa nampiasaina hatramin'ny vanim-potoana fahiny izy io, tsy hoe toy ny orin-jiro fotsiny, fa koa ho fanafody amin'ny fitsaboana nentim-paharazana sy nentim-paharazana. Marina fa mila mitandrina izy ireo. Noho izany, ity fitaovana ity dia hiresaka momba ny endriky ny bevohoka, ary koa mihaino tsara ny fanasitranany sy ny mety ho fanoherana.
Ny toetra mampiavaka ny mouette
Ny Blueberries dia matetika miseho amin'ny blueberries, fa ny blueberries dia zavamaniry samihafa. Mandritra izany fotoana izany, ny toetra mahasoa ao amin'ny blueberries dia avo avo mihoatra noho ny voankazo hafa, hany ka hodinihintsika eto ambany ny asany sy ny fampiasany. Ny akora simika sy ny soatoavina mahavelona amin'ny voninkazo Ny famokarana akora simika dia matetika no betsaka kokoa noho ny mainty hoditra ny moka, tsy lazaina intsony ny moka.
Ahoana ny fampielezana ny mainty (aronium) tendrombohitra
Chokeberry (aronia) dia hazo maniry na hazo avy amin'ny fianakaviana mavokely. Namboarina ho toeram-pitsaboana medikaly, sakafo ary zavamaniry izy io. Any Amerika Avaratra dia heverina fa toerana nahaterahan'ny mainty hoditra mainty hoditra. Fampandrosoana ny fikolokoloina amin'ny famolavolana Famaritana amin'ny kolontsaina voajanahary sy ny zavamaniry, amin'ny fomba rehetra, ny royan dia mitazona ny toetran'ny reny sy ny toetran'ny karazany.
Ny tsiambaratelon'ny fambolena sy fikarakarana chokeberry (chokeberry)
Aronia Aronia dia manondro ny fianakaviana Rosa ravina voankazo. Tany aloha, io zavamaniry io dia nitombo ho an'ny tanjona ara-pambolena, saingy tamin'ny fotoana dia hita fa ny voankazo amin'io zavamaniry io dia manana karazana medikaly maro. Ny chokeberry koa dia tsy dia mendri-panafana loatra, ka mahatonga azy io ho lasa zaridaina tsara tarehy, ary ankehitriny dia hita any amin'ny zaridaina maro.
Ny voankazo Gooseberry dia iray amin'ireo sakafo mahavariana indrindra sy mahasoa indrindra amin'ny fahavaratra. Ny zavamaniry isan-taona ao amin'ny faritra misy antsika dia malaza be ary androany dia misy karazany iray karazana karazan-tsakay. Na izany aza, ato amin'ity lahatsoratra ity dia tiantsika ny handinika ny karazana tsara indrindra amin'ny fitsangatsanganana be loatra.
Zava-manahirana sy mahasoa ny amboadia cub
Amin'ny zavaboahary dia misy ny zavamaniry maro izay efa nampiasain'ny olona ho an'ny tanjona ara-pitsaboana, fa raha toa ka mitondra tombony fotsiny ny sasany amin'izy ireo, raha toa ka tsy misy azo antoka ho an'ny fahasalamana, dia mety hanimba azy ny hafa. Tiako ny milaza aminareo ny iray amin'ireo solontenan'ny karazana farany.
Hazo sy zava-manitra voajanahary azo ampiasaina
Ny tsiranoka alikaola fahiny dia efa fantatra ho an'ny fanasitranany. Ary na dia tsy tsara loatra aza ny voany, dia afaka mitondra tombony be izy ireo. Famaritana sy sarin'ny voankazo Juniper - zavamaniry iray avy amin'ny fianakaviana cypress, ary ny anarany amin'ny teny adalan'ny Celtic dia midika hoe "manja", "kivikivy".
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Hazo madinika